प्रेमी संग मिली श्रीमान मार्ने श्रीमती अन्ततः पुगिन प्रहरी खोरमा ! – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
प्रेमी संग मिली श्रीमान मार्ने श्रीमती अन्ततः पुगिन प्रहरी खोरमा !
| प्रकासित मिति : १ असार २०७८, मंगलवार ०७:०३
प्रेमी ओमप्रकाश यादवसङ्ग मिलेर आफ्ना पति तथा माओवादी केन्द्रका कपिलवस्तु जिल्ला नेता दिपक पाण्डेयमाथि एकैपटक दुई पिस्तोलबाट गोली चलाई मार्न लगाउने श्रीमती महिमा पाण्डेय लामो निगरानीपछि हिजो घरैबाट समातिएकी छन। गत जेठ ५ गते राती कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर ३ गोबरीमा गुडिरहेको मोटरसाइकलबाट पाण्डेयमाथि दुई राउण्ड गोली प्रहार भएको थियो । त्यसको ६ दिनपछि उनको काठमाडौंमा निधन भएको हो ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा श्रीमती महिमा र ओमप्रकाश यादवबीच प्रेम सम्बन्ध झाँगिदै गएको खुलेको छ । उनीहरूबीचको यो सम्बन्धवारे श्रीमान दिपकले थाहा पाएका थिए । तर महिमाको मन दिपकतिरभन्दा ओमप्रकाशतिर पग्लन थालेपछि उनीहरूबीच खटपट शुरु हुनु स्वाभाविक हो ।
त्यहि क्रममा दिपक बेला बेलामा ‘म हुँदाहुँदै ऊसँग किन प्रेम सम्बन्ध राखिस् ?’ भन्दै श्रीमतीसँग रिसाउन थाले । यता ओमप्रकाशलाई पनि ‘मेरी स्वास्नीसँग किन लागिस् ?’ भनेर दिपकले बेला बेलामा धम्की दिन थाले । एवम् रीतले लोग्ने- स्वास्नीबीच असमझदारी बढ्न थालेपछि महिमा र प्रेमी ओमप्रकाशले दुबैको इज्जत जोगाउन दिपकलाई सिध्याउने योजना बुनेको रहस्य खुलेको हो ।
३२ वर्षकी श्रीमती महिमाको माइती नजिकैको खुनुवा हो । भारतमा पढेकी उनी खाइलाग्दी र चिरिच्याँट्ट परेर हिँडेको कारण ओमप्रकाशले मन पराएको प्रारम्भिक बयानको क्रममा खुलेको छ । घरमा श्रीमान हुँदाहुँदै अर्कासँग लागेर श्रीमानलाई नै सिध्याउने योजना बुनेपछि अहिले पाण्डेका ५ वर्षकी छोरी र ११ वर्षका छोराको बिचल्ली भएको छ । अब महिमाले बुनेको रंगीन सपना पनि जेलको चिसो छिँडीमा बित्ने भएको छ ।
श्रीमतीले आफूले श्रीमान दिपकलाई मार्न लगाएको स्वीकारेकी छन् । शंकास्पद सबै मान्छेसँग बयान लिएपछि कुरो खुलेको प्रहरीको दाबी छ । शुरुमै अलिअलि शंका लागेपछि प्रहरीले महिमाको सुरक्षा भन्दै महिला प्रहरीलाई उनको घरमा नै निगरानीको लागि खटाएको थियो । सबै पक्षबाट हत्यामा श्रीमतीको हात रहेको पुष्टि भएपछि प्रहरीले उनलाई हिजो पक्रेको हो । हत्यामा प्रयोग गरिएका हतियार पनि प्रहरीले सबै बरामद गरेको छ । दिपक पाण्डेयमाथि दुई जनाले एकै चोटी फायर गरेको देखिएको छ । साकिर अली पखिया र रमजान साह मुसलमान दुबैले अर्को मोटरसाइकलमा पछाडि बसेर राती सडकमा गुडिरहेको बेला एकैपटक दिपकमाथि फायर खोलेका थिए ।
सबैभन्दा अचम्मचाहिँ दुबै हतियारबाट पाण्डेयमाथि एकैचोटी फायर भएको थियो । उनलाई दुई गोली लागेको थियो । पछि एउटा खोका भेटिए पनि अर्को फेला परेन । आमाको अर्कैसँगको लसपसले दुई लालाबालाको बिचल्ली भएको छ भने उनीहरूका बाबुको समेत जीवन समाप्त भएको छ । जनआस्थाबाट
चितवनमा आज २ कोरोना संक्रमितको मृत्यु
भरतपुर १५ श्रीरपुरमा कृषि कर्म,कृषि प्राविधिकबाट
९ लाखका लागि आफनै साथीको हत्या गर्ने सेनाका एक सिपाही पक्राउ। १ असार २०७८, मंगलवार ०७:०३
सुजिता मृत्यु प्रकरण : सम्बन्ध दाजुबहिनीको गतिविधि प्रेमी प्रेमिकाको! १ असार २०७८, मंगलवार ०७:०३
गुरुङका हत्यारा प्रहरीद्वारा पेस्तोलसहित पक्राउ, केहिबेरमा सार्वजनिक गरिदै! १ असार २०७८, मंगलवार ०७:०३
बागमती सरकारले माडीका गन्धर्व समुदायका लागि ४६ घर र सांस्कृतिक संग्रहालय बनाइदियो १ असार २०७८, मंगलवार ०७:०३
चितवनको भरतपुरमा एक पुरुषको शव फेला पर्यो, टाउकोमा गोली हानी हत्या गरिएको हुनसक्ने आशंका १ असार २०७८, मंगलवार ०७:०३
भरतपुर महानगरलाई कृषि मैत्री महानगर बनाईने १ असार २०७८, मंगलवार ०७:०३
स्काउटमा विकृती विसंगती तथा भ्रष्टाचार मौलाउदै गएको भन्दै स्काउट प्रगतिशिल संघर्ष समितिको भत्सर्ना १ असार २०७८, मंगलवार ०७:०३
१६५ सांसदको समर्थन सहित देउवाले पाए विश्वासको मत, विपक्षमा ८३ मत। १ असार २०७८, मंगलवार ०७:०३
चितवन इन्जिनियर्स एसोसिएसनकाे अध्यक्षमा घिमिरे निर्वाचित। १ असार २०७८, मंगलवार ०७:०३
५९ औ ईन्जिनियर्स दिवसको अवसरमा बृक्षाराेपण कार्यक्रम सम्पन्न। १ असार २०७८, मंगलवार ०७:०३
रोटरी क्लब अफ नारायणी मिड टाउन द्वारा माडीका बाढिपिडितलाइ राहत सामाग्री बितरण १ असार २०७८, मंगलवार ०७:०३
“हाम्रो संसार नवलपुर”काे जिल्ला शाखा बिस्तार तथा समिती गठन कार्य सम्पन्न १ असार २०७८, मंगलवार ०७:०३